घाँटी यसकारण दुख्छ – डा. चोपलाल भुसाल
डा. चोपलाल भुसाल मुखको पछाडिपट्टिको भागलाई फ्यारेङस भनिन्छ । फ्यारेङसमा हुने संक्रमणलाई नै फ्यारेन्जाइटिस भनिन्छ । बिरामीहरु प्रायजसो घाँटी दुख्ने समस्या लिर अस्पताल आउछन् । फ्यारेन्जाइटिस हुने प्रमुख कारण नै संक्रमण हो । कहिलकाही संक्रमणविना पनि फ्यारेन्जाइटिस हुन सक्छ । ब्याक्टेरिया, भाईरस र फंगसको संक्रमणका कारण घाँटी दुख्ने हुन्छ । कहिलेकाहीँ एलर्जी तथा केमीकलको असरका कारण संक्रमणविना पनि घाँटी दुख्ने[Read More…]
by GreenKhabar —	June 29, 2016 —	0 comments —	मूलपेज, स्वास्थ्य
सेतो दागको घरेलु उपचार
तपाईको छालामा कतै सेतो दागले हैरान हुनुभएको छ ? कतिपय जन्मजात दागको उपचार नभए पनि प्राकृतिक तरिकाले यसको उपचार गर्न सकिन्छ । हत्केला लगायतका शरिरका विभिन्न स्थानमा पछाडि सेतो दाग वा दुबी छालासम्बन्धी समस्या भिटिलिगोका कारण हुने गर्छ । शरिरमा देखिने यस्ता दागको उपचारका केही घरेलु उपायः नरिवलको तेलः नियमित रुपमा दुबी आएको स्थानमा नरिवलको तेल लगाउदा बिस्तारै दाग हराउँछ[Read More…]
सरकारले ‘कृषि विकास रणनीति’ कार्यान्वयनमा ल्याउने
सरकारले आगामी साउनदेखि ‘कृषि विकास रणनीति’ कार्यान्वयन गर्ने भएको छ। नेपाल कृषि पत्रकार प्रतिष्ठानको आयोजनामा आज भएको ‘नेपाल धानमा कहिले होला आत्मनिर्भर’ विषयक अन्तक्र्रियामा कृषि क्षेत्रको विकासका लागि २० वर्षे ‘कृषि विकास रणनीति’ कार्यान्वयन गर्ने जानकारी दिइयो। कृषि विकास मन्त्रालयका सचिव उत्तमकुमार भट्टराईले नेपाल धान उत्पादनमा आत्मनिर्भर मात्र हैन निर्यात गर्नेसम्म बन्न सक्ने भएकाले सबै निकायको सक्रिय सहभागिता र प्रतिबद्धताको आवश्यकता औँल्याए।[Read More…]
by GreenKhabar —	June 29, 2016 —	0 comments —	मूलपेज, हरित खबर
अष्ट्रिच पालनतर्फ युवाको आकर्षण
दमक (झापा) पछिल्लो समय झापामा अष्ट्रिच पालनतर्फ किसानको आकर्षण बढ्दै गएको छ । जिल्लामा पछिल्लो समय तीनवटा अष्ट्रिच फर्म खुलेका छन् । ती तीनवटा फर्ममध्ये धरमपुर– ७ चर्चाबारीको अष्ट्रिच फर्म जिल्लाकै ठूलो फर्म हो । स्थानीय कृष्णप्रसाद रिजालले फर्म खोलेर व्यवसाय सुरु । उनले एक करोड रुपैयाँमा को लागतमा बुटवलबाट अष्ट्रिचका ५० वटा चल्ला ल्याएर फर्म खोलेका हुन्। चार बिगाहा[Read More…]
by GreenKhabar —	June 27, 2016 —	0 comments —	मूलपेज, हरित खबर
किसानले पशुजन्य उत्पादनको लागत घटाउन घाँसखेती गर्न थालेका छन् । व्यावसायिक रुपमा गाईभैँसी र बाख्रापालन गरेका किसान घाँसखेतीतर्फ आकर्षित भएका हुन् । हिउँदे, बर्खे भूइँघाँस, डालेघाँस र बहुबर्षे घाँसखेती विस्तार भएको छ । घाँसबाट आहार आपूर्ति गराउँदा पशुजन्य उत्पादनको लागत घटाउन सकिने बेनी नगरपालिका– १० तोरीपानीका किसान आनन्द रिजालले बताए । दानाको खपत कम गरी घाँसको आहार आपूर्ति गराउन सकेमा[Read More…]
by GreenKhabar —	June 26, 2016 —	0 comments —	मूलपेज, हरित खबर
बाँकेका थारु समुदायका अधिकांश महिला तरकारीखेती र पशुपालन व्यवसायमा संलग्न भएको पाइन्छ । कृषिसँग सम्बन्धित विभिन्न तालिम र बीउबिजन तथा सिँचाइ सुविधा पाएपछि उनीहरु तरकारी खेतीतर्फ आकर्षित हुन थालेका हुन् । बैजापुर, वनकटवा, कोहलपुर, बिनौना, कचनापुर, फत्तेपुर क्षेत्रका अधिकांश थारु महिला व्यक्तिगत तथा समूहमा तरकारीखेती गर्न थालेका छन् । किरण स्वयम् सहायता समूहका अध्यक्ष चैनकुमारी थारुका अनुसार, जीवन परियोजनाअन्तर्गत बेस[Read More…]
विभिन्न बालीमा हुने जोखिमको पहिचान किसानले गर्न नसक्दा काभ्रेपलाञ्चोकमा बाली बिमाप्रतिको आकर्षण बढ्न सकेको छैन । बाढी वा डुबान, पहिरो वा भूस्वखलन, असिना, हिँउ, आगलागी र चट्याङका कारणले पनि बालीमा क्षति पुग्छ भन्ने ज्ञानको अभावका कारण बाली बिमाप्रतिको आर्कषण बढ्न नसकेको हो । बिमा कम्पनीसम्म किसानको पहुँच नभएको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत दीपक पौडेल बताउँछन् ।[Read More…]
एकीकृत शत्रुजीव व्यवस्थापन (आइपिएम) तरिकाले खेती गर्दा फाइदा हुने भएपछि किसानहरु यसतर्फ आकर्षित भएका छन्। आम्दानी पनि बढ्ने, मानवीय स्वास्थ्यमा असर नपर्ने र माटोको उर्वराशक्तिको पनि विकास हुने भएकाले आइपिएम तरिकाले खेती गर्न थालिएको चितवनको पदमपुरकी किसान सरस्वती आचार्यले बताइन्। “विगतमा विषादी धेरै प्रयोग गर्ने गरिन्थ्यो, अहिले छाडियो”– आचार्यले भनिन् “यो सीप सिकेपछि जैविक प्रणाली र आइपिएम प्रविधिबाट तरकारी लगाउन[Read More…]
अल्लो बन्यो आम्दानीको स्रोत
खोला तथा वनपाखामा कुहिएर जाने विषालु अल्लो आम्दानी स्रोत बनेको छ। हातखुट्टाले छुँदा पोल्ने विषालु अल्लो प्रशोधन गर्ने सीप सिकेपछि यो कृषकको आम्दानीको स्रोत बनेको हो। घना जङ्गल वा खोल्सामा ठूलोपात भएको लामो रेसादार विषालु काँडा भएको ‘सिस्नो’ प्रजातिको बिरुवाका रुपमा अल्लोलाई लिने गरिन्छ। पशु चौपायाले खान नसक्ने हुँदा यो प्राजाति प्रशोधन गरी धागो निकाल्ने गरिन्छ। लघुउद्यम विकास कार्यक्रमबाट अल्लो[Read More…]
किन लाग्छ फलफूलमा कीरा ?
उत्तम काप्री काठमाडौं नेपालको भौगोलिक विविधता र हावा पानीमा प्रायः सबैजसो फलफूलको खेती गर्न सकिने अवस्था रहेको फलफूल विज्ञहरु बताउँछन्। वातावरणअनुकुल हुँदाहुँदै पनि कुल खपतको ८० प्रतिशत फलफूलहरु भने विदेशबाट नै आयात भइरहेको छ। भौगोलिक वनावट र हावापानी सुहाउँदो भएकै कारण पछिल्लो समय नेपालमा व्यवसायिक रुपमा फलफूल खेती अघि बढेको छ। पुरानै पद्धतिमा खेती हुनु, प्राविधिक रुपमा किसान दक्ष नहुनु,[Read More…]